5 taleefan oo casri ah oo shaashad yar leh | Wararka Gadget
Suuqa taleefanka gacanta ayaa muddo ka dib u xuubsiibtay dhanka taleefannada gacanta oo leh shaashado sii kordhaya oo sii kordhaya. Caddaynta tani waa inay sii kordheyso fududahay in la helo aalado kala duwan oo na siiya shaashad 6-inji ah oo mararka qaarkood xitaa ka sarreysa tiradan tirada badan ee inji. Si kastaba ha noqotee weli waxaa jira tiro badan oo isticmaaleyaal ah oo dalbanaya boosteejooyin leh shaashad aad u yar.
Iyo inkasta oo ay u muuqan karto soosaarayaal badan ayaa wali bixiya aalado leh shaashado u dhexeeya 4 iyo 5 inji. Xaaladaha badankood, iyagu waa moodello yar yar ama iswaafaqsan oo ah calankooda, oo in kasta oo ay leeyihiin shaashad yar, ay ku hayaan sifooyinka cajiibka ah iyo qeexitaannada inta badan.
Haddii ay dhacdo inaad raadineyso taleefan casri ah oo ku siinaya shaashad aan aad u weyneyn oo qiyaastii ah 4,5 inji, ha u sii eegin maxaa yeelay qodobkaan waxaan kuugu soo bandhigi doonaa 5 ka mid ah aaladaha ugu wanaagsan ee mobilada ee suuqa oo aan aad u weyneyn shaashadda.
4 Motorola Moto E4G
Sony Xperia Z5 Waa mid ka mid ah taleefannada casriga ah ee ugu wanaagsan ee maanta suuqa laga heli karo iyo Xperia Z5 Compact waa nooca la yareeyay ee calankan awoodda badan. Waxay sidoo kale leedahay shaashad 4,6-inji ah oo leh xallinta HD, taas oo ah mid ka mid ah xaaladaha lama huraanka ah ee ay tahay inuu terminalku yeesho si uu uga muuqdo liiskan.
Marka xigta waxaan qaban doonnaa dib u eegis kooban oo ku saabsan astaamaha muhiimka ah iyo qeexitaannada heshiiskan 'Xperia Z5 Compact';
Cabirka: 127 x 65 x 8.9 mm
Shaashad 4,6-inji ah oo leh xallinta HD ee 1.280 x 720 pixels iyo 320 dpi
Xusuusta RAM ee 2GB
16GB keydinta gudaha ah oo lagu ballaarin karo kaarka microSD
23 megapixel camera gadaal iyo 5 megapixel camera hore
2.700 mAh batari
Marka la eego qeexitaannadan, qofku wuu garan karaa in tani aysan ahayn uun taleefannada casriga ah, iyo in kasta oo uu leeyahay shaashad yar, awooddeeda iyo waxqabadkeedu aad u weyn yahay.
Haddii aad raadineyso qalab mobiil leh shaashad aad u weyn, Heshiiskan 'Xperia Z5 Compact' wuxuu noqon karaa mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican, sidoo kale ku faanaya kamarad aad u fiican.
Waad iibsan kartaa tan Sony Xperia Z5 Compact iyada oo loo marayo Amazon qiimaha 420 euro.
Inta badan aaladaha mobilada ee Samsung waxay u muuqdaan inta badan shaashadooda, tayo sare leh iyo xallin aad u wanaagsan, laakiin sidoo kale leh cabbir ballaaran Si kastaba ha noqotee, qoyska Galaxy-ka ee boosteejooyinka waxaa sidoo kale jira meel loogu talagalay taleefannada casriga ah oo leh shaashado yaryar.
Tusaale waxaa ah Samsung Galaxy A3 taasi waxay leedahay a taxaddar aluminium ah, shaashad SuperAMOLED ah oo 4,5-inji ah iyo awood ka xiiso badan.
Kuwani waa sifooyinka iyo tilmaamaha ugu muhiimsan ee Galaxy A3;
Cabirka: 130,1 x 65,5 x 6,9 mm
Shaashad 4,5-inch ah oo xallinkeedu yahay 960 x 540 pixels iyo 245 dpi
Xusuusta RAM ee 1GB
16GB kaydinta gudaha
8 megapixel camera gadaal iyo 5 megapixel camera hore
1.900 mAh batari
Shaki kuma jiro inaan wajahno taleefan casri ah oo wata astaamo la hagaajiyay, oo aan ku ridi karno waxa loogu yeero bartamaha suuqa, laakiin taasi waxay noqon kartaa haddii aan raadineyno qalab yar, laakiin awood leh, ku dhowaad kaamil ah.
Qiimaha tan Samsung Galaxy A3 Hada waa 244 euro, inkasta oo ay kuxirantahay meesha aad ka iibsaneyso waxaad badbaadin kartaa xoogaa yuuro ah. Tusaale ahaan Gudaha Amazon waxaad ku iibsan kartaa 240 euro.
Apple waxay had iyo jeer dooraneysay aaladaha mobilada oo leh shaashado ka hooseeya 5 inji, in kasta oo imaatinka iPhone 6 ay sidoo kale bilawday nooc leh shaashad ballaaran oo ujeedadeedu tahay in la daboolo baahiyaha dhammaan isticmaaleyaasha.
Iibsasho wanaagsan, haddii waxa aan raadineyno ay yihiin taleefan casri ah oo wata shaashad yar, waxay noqon kartaa iPhone 5S, kaas oo na siinaya shaashad 4-inji ah, naqshad qurxoon iyo awood aad u weyn oo noo oggolaan doonta inaan ku qabanno waxqabad kasta xarunteenna.
In kasta oo xaqiiqda ah in iPhone 5S-kani in muddo ah suuqa laga heli karay, haddana weli wax buu leeyahay in ka badan sifooyinka xiisaha leh iyo qeexitaannada, sida aan hoos ka arki karno;
Cabirka: 123,8 x 58,6 x 7,6 mm
Shaashad 4-inch ah oo xallinkeedu yahay 1136 x 640 pixels iyo 326 dpi
16GB keydinta gudaha ah oo aan lagu ballaarin karin kaarka microSD
8 megapixel camera gadaal iyo 1.2 megapixel camera hore
Nasiib darrose qiimaha iPhone 5S, in kasta oo ay xaqiiqda tahay in ay tahay nooc xoogaa duug ah oo iPhone wali wali aad u sarreeyaIn kasta oo haddii waxa aad rabto ay tahay inaad yeelato nooc hoos loo dhigay, illaa inta shaashadda laga hadlayo, iPhone-kani wuxuu noqon karaa xulasho aad u wanaagsan.
Dabcan, waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale sugi karto dhowr maalmood, si iPhone 5se si rasmi ah loo soo bandhigo, taas oo loo maleynayo inay yeelan doonto shaashad yar oo aad u cusbooneysiin doonta oo soo hagaagtay marka la barbar dhigo iPhone 5S-kan.
Ilaa maanta, iPhone 5S-kan ayaa sii wadaya inuu ganacsigiisu sarreeyo, qiimahiisuna wuxuu u dhexeeyaa 400 ilaa 450 euro iyadoo kuxiran meesha aan ka iibsanno terminal-ka. Tusaale ahaan Amazon waxaan tan ka heli karnaa iPhone 5S loogu talagalay 410 euro. Waxaa la filayaa in, sidaan horay u sheegnay, sicirkan si weyn loo dhimi karo imaatinka iphone-ka cusub ee suuqa soo gali doona shaashad 4 ama 4,5 inji ah.
La Qoyska Moto E, taas oo leh noocyo kala duwan, waa ikhtiyaar kale oo xiiso leh oo lagu heli karo taleefan casri ah oo leh shaashad 4,5-inji ah iyo faa'iidooyinka aaladda dhexdhexaadka ah sidaas darteedna ugu habboon isticmaale kasta oo aan wax badan ka dalban qalabkooda.
Haddii waxa aan raadineyno ay yihiin taleefan casri ah oo ah bahal dhab ah, in kasta oo cabirkiisa iyo cabirkiisu yar yahay, tan Motorola Moto E4G Ma ahan inay ahaato ikhtiyaar wanaagsan sidaan horeyba u sheegnayna waa aalad meel dhexaad ah, taasna haddii ay tahay muuqaal la yaab leh.
Kuwani waa astaamaha iyo tilmaamaha Motorola Moto E 4G;
Cabirka: 129,9 x 66,8 x 12,3 mm
8GB keydinta gudaha ah oo lagu ballaarin karo kaarka microSD
5 megapixel camera gadaal iyo VGA hore
Shaki kuma jiro in tani aysan ahayn casriga casriga ah, laakiin waa qalab heer-gal ah, aad isugu dheellitiran marka la eego waxqabadka iyo waxaan ku iibsan karnaa qiimo ka hooseeya 100 euro.
Si loo xiro liiskan waxaan go'aansanay inaan meel u baneyno Xiaomi Redmi 2, oo ah aalad moobayl ah oo leh shaashad dhan 4,7 inji. Iyada oo leh shaambada naqshadeynta khayaanada ee soo saaraha Shiinaha, terminaalkan sidoo kale wuxuu leeyahay in ka badan qeexitaanno xiiso leh iyo sidoo kale qiimo dhimis, taas oo ka dhigaysa mid ay heli karaan adeegsade kasta iyo jeebkiisa.
Haddii aad raadineyso taleefan casri ah, xariggan Xiaomi waa inuu shaki la'aan noqdaa mid ka mid ah xulashooyinkaaga ugu waaweyn, in kasta oo nasiib darro tahay inaad ka iibsato dhinac saddexaad, maadaama soo saaraha Shiinaha uusan ka iibin qalabkooda dalkeenna xilligan.
Marka xigta waxaan dib u eegeynaa astaamaha muhiimka ah iyo qeexitaannada Xiaomi Redmi 2;
Cabirka: 133.9 x 67,1 x 9,1 mm
Shaashad 4,7-inch ah oo xallinkeedu yahay 1.280 x 720 pixels iyo 313 dpi
8 megapixel camera gadaal iyo 1.6 megapixel camera hore
Iibinta waxaa ka mid ah, marka lagu daro kuwa aan horay u soo sheegnay, waxaa sidoo kale jira is waafajin buuxda oo la leh dukaanka rasmiga ah ee Google ama wixii la mid ah Google Play, wax nasiib daro ah oo aan ka dhicin dhamaan xarumaha shirkadaha Shiinaha.
Waad iibsan kartaa tan Wax alaab ah lama helin.In kasta oo haddii aadan dhib ka qabin inaad hesho, waxaad ka iibsan kartaa mid ka mid ah dukaamada badan ee asal ahaan ka soo jeeda Shiinaha ee laga heli karo shabakadaha shabakadaha iyo meesha aad ka heli karto qiimo jaban.
In kasta oo aaladaha moobiilku u wareegeen dhanka shaashadaha weligood ka weynaa, haddana weli waxaa jira taleefannada gacanta ee casriga ah oo leh shaashado cabbirkoodu hooseeyo oo loogu talagalay dhammaan kuwa jecel qalabka is haysta ee aan ku fadhiyin boos aad u badan jeebabkaaga.
Liiskan waxaan ku tusnay kaliya 4 terminaal oo leh shaashad yar, laakiin ha ka shakinin inay jiraan qaar kale oo dheeraad ah, sidoo kale runtii waa wax xiiso leh, laakiin waxaan go'aansanay inaan doorano markan, kuwa aan soo bandhignay. Waxaa laga yaabaa in muddo ah waxaan sameyn doonnaa liis cusub, oo ku darno aalado kale oo dheeri ah oo aan ku darno wararka laga yaabo inay dhowaan suuqa gaaraan.
Ma ka mid tahay kuwa doorbida aaladda mobilada leh shaashad yar?. Noo sheeg sababahaaga booska loogu talagalay faallooyinka qoraalkan ama shabakadaha bulshada midkoodna ee aan joogno oo aan dooneyno inaad nala fal-gasho.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Telefoon » Mobiles » 5 taleefan oo casri ah oo shaashad yar leh
Waxay ila tahay inay jiraan taleefoono kale oo tayo sare leh oo leh shaashadaha cabirradaas, sida BlackBerry Z10 ama z30 oo ka xoog badan kuwa aad muujisay.
Gabi ahaanba waan kugu raacsanahay, waan fiicanahay, laakiin labadaba Z10 iyo Z30 labaduba horeyba way u iloobeen dadka isticmaala badankood.
Salaan iyo mahadsanid faallooyinkaaga!
Ku jawaab Villamandos
Haddii aad dhigto xiaomi taasi waa 4,7 sababta oo ah ma dhigeysid shaashadda iphone 6 / s inuu noqdo 4.7 oo aad u cayiliso kuwa kale oo dhan.
Waa dhererka iyo ballaca qalabka ka sii weynaanaya
Qof kastaa wuxuu leeyahay dhadhanka kooxda
Laakiin waxa la codsaday waa qalab aad u weyn oo leh sis heer sare ah oo noqon kara